Warbixin laga soo saaray gudniinka Fircooniga - BBC Somali
Warbixin laga soo saaray gudniinka Fircooniga
6 Febraayo 2016
Image caption Somaliya waxaa FGM ka kaga horeeya dalal badan
Warbixintan ay soo saartay hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in tirada guud ee gabdhaha iyo haweenka la guday sannadkii hore marka la fiiriyo ay 70 milyan dheer yihiin sannadkii ka horreeyey ee 2014. Warbixintu waxay sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay kororka tirada dadka. Golaha guud QM ayaa dec 2012 ansixiyey in la mamnuuco gudniinka dumarka oo ah dhaqan qarniyaal soo jiray, waxaana ka mid ah yoolalka QM ee la isla qaatay September sannadkii hore in gebi ahaanba gudniinka la baabi'iyo marka la gaaro 2030.
30ka dal ee warbixinta lagu sheegay ayaa badidood ku yaalla Africa iyo Asia. Inta badan gudniinka dalalkaas ka dhaca ayey warbixintu sheegtay in lagu sameeyo gabdhaha ay da'doodu 5ta sano ka yar tahay. Tusaale ahaan dalka Yemen ayey warbixintu sheegtay in 85% gabdhaha la gudo todobaadka ugu horreeya marka ay dhashaan.
Warbixintu waxay sheegaysaa in tirakoob ay samaysay lagu ogaaday in gabdhaha 14ka sano ka yar ee la guday ay tiradoodu gaarayso 44 malyan, ayadoo dalalka ugu badan ee gabdhahaas lagu gudayna ay yihiin Gambia 56%, Mauritania 54% iyo Indonesia oo ilaa kala bar gabdhaha ka yar 11ka sano la guday.
Soomaaliya ayey warbixintu sheegtay in gudniinku uu weli ku badan yahay oo dumarka da'doodu u dhaxayso 15 - 49 la guday 98%, halka Guinea iyo Jabuutina ay warbixinta UNICEF sheegtay in dumarka da'daas u dhaxeeya lagu guday 97% iyo 93%.